Issimadii loo xilsaaray dhexdhexaadinta xiisaddii xaafadda Garsoor oo soo gunaanaday hawlahoodii. – Radio Daljir
Issimadii loo xilsaaray dhexdhexaadinta xiisaddii xaafadda Garsoor oo soo gunaanaday hawlahoodii.
Garowe, Nov 28 ? Issimadii isku-dhafka ahaa ee muddada ku hawlanaa xal-ka-gaaridda xurguftii colaadeed ee xaafadda Garsoor ee magaalada Galkacyo ayaa lagu wadaa in ay soo gabagabeeyaan qorshe-dhiraan-dhirneed wakhti dheer ay ku hawlanaayeen si ay u turxaan bixiyaan dhibihii ka dhashay dhacdadaasi.
Issimada iyo indheergaradka dhaqameed ee ku hawlanaa arrintaasi, ayaa dhawrkii todobaad ee ugu dambeeyey ku suganaa magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland si ay u dhammaystiraan is-afgarad laga gaaray xiisaddaasi taasoo issimadu horay uga ballameen in lagu soo gabagabeeyo magaalada Garowe.
Habeennibada caawa ah ayaa lagu wadaa aqalka madaxtooyada ee magaalada Garowe in lagu qabto xaflad lagu soo af-meerayo madmadawgii iyo is-maandhaafkii ka dhashay dhacdadii Garsoor, iyadoo la filayo issimada iyo indhaargaradka dhaqan ee in ay soo bandhigaan hababkii xaleed ee ay wax u maareeyeen.
Intii issimadu ay ku sugnaayeen magaalada Garowe waxaa dhacay kulamo is-daba-joog ah oo ay yeelanayeen issimada, Ergada dhaqan ee beesha Leelkasse iyo sidoo kale masuuliyiin ka tirsan dawladda Puntland oo ay ka mid yihiin madaxda sar sare ee dawladda sida m/weynaha iyo ku-xigeenkiisa, guddoonka baarlamaanka iyo golayaasha kale ee dawladda.
Kulamadaasi ayaa si durugsan la isku hoga-tusaaleeyey hababka ugu haboon ee looga buskoon karo xurgufihii dhacay, iyadoo dhammaanba si fiican la iskula fahmay maaraynta mushkiladdii colaadeed ee xaafadda Garsoor.